Madaxwaynaha hal talo iiga geeya. By: Garyaqaan Guuleed Dafac | Haldoor News
Madaxwaynaha hal talo iiga geeya. By: Garyaqaan Guuleed Dafac
Markii Xeerka Booliiska la ansixiyay waan ku farxay. Waxaan la jeclaystay in Madaxwaynaha cusub oo aan markaas xilka la wareegin uu noqdo qofka saxeexa ee uu magaciisu ku suntanaado xeer qiimo badan oo dadka reer Somaliland mahadin doonaan marka la dhaqangeliyo. Inkasta oo aanan taageere kuu ahayn adi iyo cid kale oo tartantay toona, hadana waxaa ila haboonayd in madaxwaynihiii hore u diiday aanu qaadan guusha magaca xeerka.
Farxadda waxaan la wadaagay dad badan oo reer Somaliland ah oo jecel booliis qurux badan, sharaf badan, dadkiisana sharfa. Guul bay ahayd in la helo xeer maareeya nolosha booliiska iyo ta dadka ay u shaqeeyaan.
Madaxwayne xeerkii waad saxeexday. Balse nasiib darro ilaa hada faafinta rasmiga ah laguma soo saarin. Ma dhaafin xafiiskaaga iyo xafiisyo dhawr ah. Sida ku cad qodobka 75aad ee Dastuurka waxaay ahayd in la faafiyo si loo dhaqangeliyo.
Inuu shaqeeyo Xeerku dadka reer Somaliland ee ku doortay waa u guul, adna waa kuu sharaf. Ma jirto wado sharci oo la isku hortaagi karaa.
Waxaan dareensahay in dadkii ka soo horjeeday ee sababay in markii hore lagu celiyo Golaha Wakiiladu ay kuu soo geli karaan marar badan. Balse dadka shacabka ah ee uu nasteexada u yahay aanay heli karin fursad caynkaas ah.
Sidaasdarteed, waxaan kaa codsanayaa inaad dhaqangeliso Xeerka Booliiska Somaliland. Xeerkii hawsha wayn loo galay sidii loo heli lahaa, adiga oo dadku doorteen aad saxeexday, Baarlamaankii dadku doorteenna uu ansixiyay, cidda isku hortaagta si ka soo horjeedda Dastuurkii iyo rabitaankii shacabka, ayaanu magan kaaga nahay inaad ka diidid oo u hiilisid dastuurka.